Fizahantany “ITM 2018” : miantso ny mpandraharaha ny BNI | NewsMada
Fizahantany “ITM 2018” : miantso ny mpandraharaha ny BNI
Ankoatra ny fiaraha-miasa amin’ny Federasiona trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana, miditra manohana ny fizahantany koa ny BNI Madagascar. Mandray anjara amin’ny ITM (1) faha-7, ho fanomezan-danja ny fizahantany ny BNI, nanomboka omaly hatramin’ny 3 jona izao, eny Andohatapenaka. Mitodika amin’ireo mpandraharaha na olon-tsotra io banky io hampivoatra ny fizahantany.
Tolotra « Soava dia », araka izany anarany izany, atao indrindra ho an’ny rehetra. Manana ny tolotra ho azy koa ireo trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana, araka ny maha orinasa azy ireny, manome asa ho an’ny tanora. Mahita izay mifanandrify aminy ny rehetra mandritra ny ITM, araka ireo sokajiny rehetra, indrindra ho an’ny fampiasam-bola. Mbola tsy ampy betsaka eto Madagasikara izay tsy fampiasam-bola izay, tsy amina sehatry ny fizahantany ihany.
Ho fampiroboroboana ny fizahantany eto an-toerana, tolotra iray lehibe ho an’ny mpandraharaha ny fahazoan’izy ireo manofa TPE (2), hahafahana mandoa vola amin’ny karatra Visa na Mastercard. Manamora ny asa izany sy manampy betsaka ireo vahiny mpizahatany. Tsy misy hofany mandritra ny telo volana ny misoratra hatramin’ny 14 jona hampiasa io TPE io.